လူတွေမြင်နိုင်တဲ့ ခမ်းနားထည်ဝါမှုများ နောက်ကွယ်က အမည်မသိပေးဆပ်မှုများ
ကျွန်တော်တို့ အပြင်သွားတဲ့အခါ နာမည်ကောင်းနဲ့ အရမ်းချမ်းသာကြွယ်ဝပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ သူဋ္ဌေးကြီး တစ်ယောက်ကို လမ်းမှာတွေ့လိုက်မိပြီဆိုပါစို့ …. ကျွန်တော်တို့ အရင်ဆုံး ဘာစဉ်းစားမိမလဲ….???
" အဲဒီလူကြီးက အရမ်းချမ်းသာတာပဲ...သူက ဘယ်ကုမ္ပဏီကြီးရဲ့ပိုင်ရှင်လေ။ သူ့ဆီမှာ အိမ်တွေ အများကြီး ကားတွေလည်း အများကြီးပဲ... လုပ်ငန်းတွေကလည်းအများကြီး...သူစီးတဲ့ကားကြီးက ကောင်းလိုက်တာ.
အိမ်ကြီးကလည်း ခမ်းနားလို့.. လူကလည်း သန့်နေတာပဲ .. တစ်ပတ်တစ်ပတ်ကို စင်္ကာပူထိ သွားပြီး
Shopping ထွက်တာဆိုပဲ ... လုပ်ငန်းရှင်အချင်းချင်းတောင် သူကို အားကျရတယ်" စသဖြင့် စသဖြင့် ...
ကျွန်တော်တို့တွေ အရင်ဆုံးမြင်လိုက်တာက ချမ်းသာကြွယ်ဝတဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ပုံရိပ်မှာ ... သူ ငွေကို ဘယ်လိုတွေ သုံးတယ် ဘယ်လိုအိမ်မှာ နေတယ်... ဘယ်လိုကားတွေ စီးတယ် … စသဖြင့် စသဖြင့် သန်းကြွယ်သူဠေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြင်ပရုပ်သဏ္ဍာန်ကို ကျွန်တော်တို့ ပထမဆုံး အရမ်းအားကျတယ်။ သူ့လိုမျိုး ဘယ်သူမဆို လိုချင်ကြတယ်... ကျွန်တော်တို့အမြင်မှာ သူဘ၀ကအရမ်းကို ခမ်းနားကြီးကျယ် လွန်းတယ်လေ… ။
Recommended for you - သင့်အတွက် အကျိုးရှိစေမည့် ဘဝသင်ခန်းစာတွေကို ပေးနိုင်မည့် japan anime series
ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်တို့မေ့သွားတာက ခမ်းနားကြီးကျယ်လှတဲ့ သူ့ရုံးခန်းကြီးထဲ ထည်ဝါလှတဲ့ သူရဲ့အလုပ် စားပွဲနောက်ကွယ်က သူရဲ့စိတ်ဓာတ် အတွေးအခေါ် ကိုပါပဲ။ ကျွန်တော်တို့တွေက သူရဲ့ပြင်ပ အသုံး အဆောင် အရာဝတ္ထုတွေကိုပဲမြင်တတ်ကြပြီး သူ ဒီလိုဘ၀ ရောက်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်ခဲ့တယ်ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့တယ် ဘယ်လိုနည်းလမ်းတွေ ရှာပြီး အောင်မြင်အောင်လုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မေ့လျော့နေကြတယ်။
သာမန်လူအများစုက အဲဒီသူဋ္ဌေးကြီးရဲ့ ပိုက်ဆံအိတ် ဘယ်လောက်ကြီင်္းတယ်ဆိုတာသာ စိတ်ဝင်စားကြပြီး ဒီသူဋ္ဌေးကြီး ပိုက်ဆံအိတ်ထဲ ငွေတွေ ၀င်မြဲဝင်နေအောင် ဘယ်လိုလုပ်ပါလိမ့်လို့ တွေးမိတဲ့သူဟာလူနည်းစု
ပထမတစ်စုက သူဌေးကြီးရဲ့ငွေထုပ် ၊ အဆောင်အယောင်တွေသာ အားကျ ငေးမောနေတတ်ပြီး ဘယ်လို ရှာရမလဲ မတွေးမိတဲ့ မတွေးချင်တဲ့ အုပ်စုဖြစ်ပြီး
ဒုတိယလူနည်းစုကတော့ သူဘယ်လိုရှာလဲ ၊ကိုယ်ရော ဘယ်လိုရှာရင်ရနိုင်မလဲ ၊ သူ နည်းလမ်းတွေက ဘာလဲ သူဌေးစဉ်းစားသလို လိုက်စဉ်းစားနိုင်မဲ့ အုပ်စုဖြစ်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ အဲဒီအချက်ကသာ ကျွန်တော်တို့ကို ချမ်းသာဖို့ ဆင်းရဲဖို့ ကွဲပြားသွားစေတဲ့အချက်လို့ စီးပွားရေး လုပ်ငန်းရှင်ကြီးတစ်ဦးက ပြောပါတယ်။
"လူတွေကကျွန်တော်ချမ်းသာတာ အောင်မြင်တာကိုပဲမြင်ကြတာကျွန်တော်ဘယ်လို ကြိုးစားခဲ့ရတယ် ဘယ်လို နည်းလမ်းရှာခဲ့ရတယ်ဆိုတာ မမြင်ဘူးတဲ့”။ ဒီတော့ ဆက်စပ်တွေးကြည့်ရင် ထိုက်တန်အောင်
ကြိုးစားမှုကြောင့်သာ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့နေထိုင်မှုကိုရတယ်ဆိုတဲ့ အဖြေထွက်လာပါတယ်။ သူရဲ့လုပ်ရည် ကိုင်ရည် ၊ အရည်အချင်း ၊ အတတ်ပညာ ၊ အတွေ့အကြုံ ၊ အတွေးအခေါ်တွေဟာ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ ဘ၀နဲ့ ထိုက်တန်တဲ့ အချက်တွေရှိလို့သာ ရရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်။
Recommended for you - စကားလုံးများထဲမှ အမှန်တရား
ကျွန်တော်တို့အများစုဟာ လူတစ်ယောက် ချမ်းသာသွားတယ်ဆိုရင် သူ ကံကောင်းလို့ ဒါမှမဟုတ် သူချမ်းသာတာတွေက မိုးပေါ်ကပဲ ကျလာသလို ချက်ချင်းပဲ ရွှေတောင်ကြီးပေါက်လာသလို ထင်တတ် ပါတယ်။ ကိုယ်နဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲတွေးကောင်းတွေးမိနိုင်ပါတယ်။ သူ ဘယ်လိုချမ်းသာအောင် ဘယ်လိုလုပ် သွားတယ်ဆိုတာ လုံးဝ မစဉ်းစားမိသလောက်ပါပဲ ..... ဥပမာ မြင်အောင်ပေးရရင် ကိုယ်ကိုတိုင်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာ ၀န်ထမ်းလုပ်နေတယ်ဆိုရင် ငါတို့ သူဋ္ဌေးက ဘယ်လိုသုံးတာ ဘယ်လိုကားစီးတာ သူဋ္ဌေး အိမ်ကဘယ်လို ဘယ်လောက်ကြီးတာ စသဖြင့် ကုမ္ပဏီတစ်ခုစီက ၀န်ထမ်းအချင်းချင်းတွေ့ရင် သူနိုင်ကိုယ်နိုင် ကြွားတတ်ကြတာကို တွေ့ဖူးပါလိမ့်မယ်။ တစ်ခါတစ်ခါမှ ကိုယ့်သူဋ္ဌေးက ဘယ်လို နည်းလမ်းနဲ့ငွေရှာတော်တာ ဘယ်လိုတာဝန်ယူ တတ်တဲ့စိတ် ရှိတာ လို့ ကြွားတာသိပ်တွေ့ရမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ တကယ်ဆို ကျွန်တော်တို့တွေဟာငွေထုပ်ကိုသာ မြင်တတ်ပြီး ငွေရှာနည်းကို
ငွေထုပ်ကိုသာ အားကျပြီး ငွေရှာနည်းကို အားမကျတတ်ခဲ့ကြပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဒီနေ့ ဒီလောက်ပဲ ရ နေတဲ့အချိန်မှာ အချို့သောသူတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ထက် များစွာချမ်းသာနေကြတာဟာ ကျွန်တော်တို့ ထက် ငွေရှာတဲ့နည်း ၊ ငွေဝင်တဲ့နည်းတွေ ရှိနေတယ်လို့ မထင်မိဘူလား။ သူတို့ ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲဆိုတာ မတွေးသင့် ဘူးလား။ မစဉ်းစားသင့်ဘူးလား ? ကျွန်တော်တို့ စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။ ရာထူး နေရာနဲ့ ပတ်သက်ရင်လည်း ထိုနည်းလည်းကောင်းပါပဲ။ ကုမ္ပဏီ ကော်ပိုရေးရှင်း အဖွဲ့အစည်းတွေမှာ ခေါင်းဆောင် ၊ ဥက္ကဌ ၊ မန်နေဂျင်းဒါရိုက်တာ ၊ CEO ဆိုတဲ့ ရာထူးတွေက တပ်မက်ချင် လောက်စရာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ ရာထူး ကြီးကြီးယူထားရသူရဲ့စားပွဲခုံနောက်က နေရာဟာ တာဝန်ယူရမှုတွေ ဆုံးဖြတ်နိုင်မှုတွေ စိတ်ရှုပ်ခံနိုင်မှု တွေနဲ့ အပြည့်ပါ။ တကယ်တော့ ရာထူးဆိုတာ ကျွန်တော်တို့ မျက်စိမှာ မြင်နေရတဲ့ ပကာသနတွေ ဂုဏ်ဒြပ်တွေ ဖယ်ချလိုက်ရင် တာဝန်ယူမှု တာဝန်ခံမှုနဲ့ လုပ်ရည်ကိုင်ရည် ဆိုတဲ့ အတွင်းထုထည်သာ ထွက်လာပါတယ်။ ဥက္ကဌကြီး ၊ CEO ကြီးဆိုတဲ့မက်လောက်စရာ ရာထူးနောက်မှာ တာဝန်ယူရမှု တွေ တစ်ထပ်ကြီးရှိနေတာ ကျွန်တော်တို့ မြင်တတ်ဖို့ လိုပါတယ်။ တကယ်တော့ ရာထူး ဆိုတာ ဘယ်လောက် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိလဲ ဘယ်လောက်တာဝန်ယူနိုင်လဲဆိုတဲ့ အချက်သာ အဓိကကျပါတယ်။ ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်မှာအထက်လူကြီးက လူတစ်ယောက်ကို ရာထူးတိုးပေးမယ်ဆိုရင် အဲဒီလူက တာဝန်ရော
ယူနိုင်ရဲ့လား ပြောတတ်ဆိုတတ်ရဲ့လား ရာထူးနဲ့တန်အောင် လုပ်ရည်ကိုင်ရည်ရှိရဲ့လား လို့ ထည့်စဉ်းစားကြပါတယ်။ရာထူးကြီးလေလေ တာဝန်ကြီးလေလေ ပါပဲ။
ဥပမာ ပေးရရင် လူတိုင်း သမ္မတကြီး ဖြစ်ချင်တယ်လို့ စိတ်ကူးယဉ်ကောင်း ယဉ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါသာ သမ္မတကြီးဖြစ်လိုက်ရင်တော့ကွာ ဆိုတာ စိတ်ကူးယဉ်မိနိုင်ပေမဲ့ ငါ ဘယ်လောက်တာဝန်ယူရမှာဆိုတာ ထည့်မစဉ်းစားမိပါဘူး ... ရာထူးဆိုတာ တာဝန်ယူနိုင်သော လုပ်နိုင်သော သူအတွက်သာ ဖြစ်သလို ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ လူနေမှု ဘ၀ဟာ သူနဲ့ထိုက်တန်တဲ့အရည်အချင်းရှိသူအတွက်သာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် ကျွန်တော်တို့ဟာရာထူးကြီးကြီးလိုချင်ရင် တာဝန်ကြီးကြီး ယူရဲရပါမယ်။ ခမ်းနားထည်ဝါတဲ့ဘ၀ လိုချင်ရင် ထိုက်တန်တဲ့ အရည်အချင်းတွေ ရအောင် ကြိုးစားရပါမယ်။
အင်္ဂလိပ်စာကို အခြေခံမှစပြီး ကျွမ်းကျင်စွာ တတ်မြောက်သည်အထိ သင်ယူချင်ပါ သလား။ IELTS စာမေးပွဲကို အကောင်းဆုံးဖြေဆိုအောင်မြင်ချင်ပါသလား။ Sayar.com.mm တွင် ရှိသော ဆရာ ဆရာမ များနှင့် ဆက်သွယ်လိုက်ပါ။
Credit: Fuji San (CG) via နည်းစနစ်ကျကျအတွေးအခေါ်
Read 14598 times Last modified on Tuesday, 13 March 2018 09:43
ကလေးတွေကို တူညီတဲ့မေးခွန်း နေ့တိုင်းမေးခြင်းက စဉ်းစားနိုင်မှု စွမ်းရည်ကို ပိုမိုမြင့်တက်စေ
ပျင်းရိသူများသည် ဥာဏ်ပို၍ ကောင်းကြတယ်
တွေဝေမှုတွေကို ဘယ်လို ကျော်လွှားကြမလဲ
မည်သူမဆိုလျှောက်ထားနိုင်ပြီး အမေရိကန်တွင် တက်ရောက်ရမည့် အိုဘားမား ပညာသင်ဆု
ဂျပန်နိုင်ငံမှာ ပညာသင်ကြားလိုသူများအတွက် လမ်းညွှန်
စိတ်ဓါတ်ဆိုတာလည်း စနစ်တကျ အားဖြည့်ဖို့လိုပါတယ်
ဥာဏ်ကောင်းပြီး ထက်မြက်စေမည့် ထိပ်တန်းနည်းလမ်း ၇ နည်း
Able Hospital Equipment